ကြိုးစားတဲ့ လူတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်း နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ မဝေဝေကျော် - For her Myanmar
ကြိုးစားတဲ့ လူတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်း နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ မဝေဝေကျော်
Knowledge|Relationships, Letters From the Heart, Motivation
ဘာမှ မရှိတဲ့ သုညကနေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သုညဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ သူမဘဝဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ယောင်းတို့ရေ… ယောင်းတို့ထဲမှာလည်း နယ်က တစ်ယောက်တည်း ရန်ကုန်ကိုလာလို့ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းပြီး ကိုယ့်တက်လမ်း ကိုယ်ရှာနေရတဲ့ ယောင်းတွေ ရှိမှာပေါ့နော်.. အက်ဒ်မင်က ဒီလိုယောင်းလေးတွေအတွက် အတုယူစရာကောင်းတဲ့ မမတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့ထားပါတယ်။ အက်ဒ်မင်လည်း အဲဒီမမနဲ့စကားပြောပြီး သူ့ကို အားကျ၊ အတုယူပြီး သူ့လိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး၊ အင်အားမျိုးရလာသလို ယောင်းတို့ကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလေးတွေ ရစေချင်တာမို့ ဒီအင်တာဗျူးလေးကို ယောင်းတို့အတွက် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..
သူ(မ)နာမည်ကတော့ မဝေဝေကျော်ပါတဲ့။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်မယ် ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကိုတက်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့။ မဝေက မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ အဝေးသင် တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းတက်နေစဉ်ကတည်းက ကျောင်းပြီးသွားရင် ရန်ကုန်ကို သွားပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
အချိန်ကျလာတော့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရန်ကုန်သွားမယ် ပြောတော့ မိသားစုက စိတ်မချလို့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ မိဘဆိုတာကလည်း သားသမီး မျက်စိရှေ့မှာ ရှိနေတာတောင် စိတ်ပူတတ်တာမဟုတ်လား ဒါလည်း အပြစ်တင်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ သူမကတော့ ဒီတိုင်းပဲ မိဘစကားနားထောင်လို့ သူမဘဝကို ကျေးရွာလေးမှာ မမြှုပ်နှံလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်ခါပြောကြည့်လည်းမရ ၊နှစ်ခါပြောလည်းမရ ၊ ဘယ်လောက်ပြောပြောမရတဲ့ အဆုံးမှာတော့ စာလေးတစ်စောင်ချန်ထားခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာပါတယ်တဲ့..
“အစ်မက အမေကိုပြောတယ်။ အမေ ရန်ကုန်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတော့ အမေက ရန်ကုန်ကိုသွားရင် အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်။ သူဖတ်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲက အကြောင်းပြောပြတယ်။ ဒီမှာ မိန်းမတစ်ယောက် သူ့ကိုကြည့်တော့ သဘောကောင်းမလိုနဲ့..ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့တော့ အလုပ်ရှိတယ်လို့ ပြောပြီး ခေါ်သွားပြီးတော့ ရောင်းစားလိုက်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ လူရောင်းစားတယ်။ နင်ဘာသိလဲ ၊ မသွားနဲ့ဆိုပြီး တားတယ်။ အစ်မ သုံးခါပြောတယ် ၊ အဖေကော ၊ အမေကောပေါ့နော်။ နှစ်ယောက်လုံးက မသွားနဲ့ပဲ တားတယ်။ အမနောက်တော့ သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး စာလေးရေးပြီး ချန်ထားခဲ့တယ်။ အမ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဒီတောင်ပေါ်မှာ မနှစ်မြှုပ်ချင်ဘူး ပြောပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ထွက်လာခဲ့တယ်။”
Related Article >>> “အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်အရာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူး၊ ဒုတိယနေရာမှာမဟုတ်ဘဲ ပထမတန်းမှာနေပါ” ဆိုတဲ့ မလှလှဝင်း
ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်နဲ့ ဘဝကြီးကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မှမဟုတ်ရင် သူများဝန်ထမ်းလည်း မလုပ်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ မဝေဟာ ရန်ကုန်ကို စရောက်လာတည်းက ကိုယ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ကျောက်ကြည့်ပြီး အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲ အဆင်ပြေတာလည်းရှိ၊ မပြေတာတွေလည်းရှိ လုပ်ကိုင်နေရာကနေ ကျောက်လောက အခြေအနေ မကောင်းတော့တဲ့အခါ လုပ်ငန်းသစ်အနေနဲ့ Guest House (ဧည့်ဂေဟာ) ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့…
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတျသိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
အတွေ့အကြုံမရှိ၊ အသိအကျွမ်းမရှိ၊ Hotel Life က လာတဲ့သူလည်း မဟုတ်တဲ့ မဝေအတွက်တော့ ဒီလုပ်ငန်းက ဘယ်လွယ်ကူပါ့မလဲ? နိုင်သလောက်အင်အားနဲ့ စလုပ်ပြီဆိုပြန်တော့ ရလာတဲ့ အိမ်ကလည်း သေးသေးလေးပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဝိုင်းပြောခဲ့တဲ့ကြားက ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူမဟာ အရာရာကို သူမအင်အားနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူမဖွင့်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ကြိုဆိုမှု ၊ ဇွဲရှိမှု ၊ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် စတင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတင် Trip advisor မှာ နံပါတ်(၁) ၊ (၂) ဆိုတဲ့ ထိပ်ပိုင်းနေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“အိမ်လေးခန်းလေးကိုငှားခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတော့ နင် ရူးနေလားပေါ့။ နင်က မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုပြီး ဝိုင်းပြောကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ကြည့်မယ်လေ။ မဖြစ်ရင်လည်း နောက်တစ်နည်းပေါ့ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ ။ အဲလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့လေးခန်းလေးကို တစ်ယောက်က တစ်ခန်းလာနေသွားလိုက် ၊ နောက်နှစ်ခန်းလာနေသွားလိုက်နဲ့ ၊ နောက်တော့ လေးခန်းလုံးကို ပြည့်နေရော ၊အစပိုင်းကဆို အမရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ ဒါကဧည့်ရိပ်မွန်ရော ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး မေးကြတယ်။ ဟုတ်တယ်.. အဲလိုပဲ အရမ်းအားငယ်ရတယ်။ အိမ်လေးကလည်း စုတ်စုတ်လေးဆိုတော့ ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ ဧည့်သည်တွေအတွက်တော့ နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ နံနက်စာဆိုလည်း အစ်မကိုယ်တိုင် ချက်တာတို့ ၊ နေ့လယ်စာ ၊ညစာအကုန် အစ်မကိုယ်တိုင် ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေနဲ့အတူတူ ချက်စား ၊ ပြုတ်စားကြတော့ ဧည့်သည်တွေက ဒီလို နွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက်လေးကို သဘောကျကြတယ် ။ အဲလိုနဲ့ သူတို့က Trip advisor မှာ Review တက်ရေးကြတယ်။ အဲလိုရေးရင်းနဲ့ လူသိများလာတာ ၊ စစလုပ်ချင်းမှာပဲ အစ်မက Trip advisorမှာ နံပါတ်(၁) ၊(၂) နေရာကို ရခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့နွေးထွေးမှုပေါ့နော် ။Techonology (နည်းပညာ) ပိုင်းလည်း ပါတာပေါ့နော်။ အနောက်နိုင်ငံကလူတွေက ဒီTrip advisorပဲကြည့်ပြီး လာတည်းကြတာဆိုတော့… အဲ့တုန်းက တစ်ခန်းကို ၃၅ဒေါ်လာနဲ့ ငှားတယ်။ ၃၅ဒေါ်လာ ၃ခန်းရှိတယ်။ ၂၅ဒေါ်လာတစ်ခန်းရှိတယ်။ အဲ့အိမ်ကလေးကို ၇သိန်းခွဲနဲ့ ငှားခဲ့တာ ။ စားစရိတ်တွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် တစ်လကို ကိုယ့်အတွက် ၂၇သိန်းလောက်ကျန်တယ်။ ၁၀လဆိုတော့ သိန်း၂၇၀ပေါ့နော်။တစ်နှစ်ကျတော့ စုမိတဲ့ငွေက သိန်း၃၀၀ကျော်သွားရော…
ဒီအလုပ်လေးက ကိုယ်နဲ့ ကံစပ်တယ်ပဲ ပြောရမလား။ အစ်မဆီမှာ ဟိုတယ်ကြီးတွေလို facilities ကောင်းကောင်း မရှိပေမယ့် ဧည့်သည်တွေက ပျော်ကြတယ်။ တစ်ချို့ ဧည့်သည်တွေကတော့ အစ်မဆီမှာ Facilityမရှိလို့ဆိုပြီး အခြားဟိုတယ်ကို ရွေ့သွားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညတွင်းချင်းပြန်ရောက်လာတယ်။ မတူဘူးပေါ့နော်။ ဟိုဘက်က ဖန်စီ(Fancy) ဖြစ်ပေမယ့် နွေးထွေးမှုကို မခံစားရဘူးဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ”
ကဲ.. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မလား ယောင်းတို့.. ဒါပေမဲ့ ဒါက မဝေရဲ့ ခရီးဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ သူ(မ)ဆက်လျှောက်နေဆဲပါ။ ဘယ်လမ်းကို ဘယ်လိုလျှောက်နေလဲဆိုတာကတော့…
Related Article >>> မုဒိန်းမှု ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မဝေရဲ့ ဟော်တယ်လုပ်ငန်းလည်း တစ်စတစ်စနဲ့ အောင်မြင်လာပြီးတော့ အခုဆိုရင် “WaiWai’s place” ဆိုပြီး အောင်မြင်စွာနဲ့ ရပ်တည်နေပါပြီ။ ဒါနဲ့အောင်မြင်နေပေမယ့် မဝေဟာ သူ(မ)ရဲ့ ပညာလက်ရင်းဖြစ်တဲ့ ကျောက်လုပ်ငန်းကိုလည်း ပစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ ခုချိန်ထိလည်း ကျောက်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို ဆက်ပြီး အသက်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့နေဆဲပါ။
အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လောက်စရာ အောင်မြင်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ၊ အပြုအမူတွေကိုလည်း သူမဆီမှာ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
မဝေကို သွားအင်တာဗျူးခဲ့တုန်းကဆို Hanaတို့ကနည်းနည်းစောပြီး ရောက်သွားခဲ့တော့ မဝေရဲ့ ဧည့်ရိပ်မွန်မှာ ရှိမနေပေမဲ့လည်း လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကို လာရင်ဘယ်နေရာမှာ စောင့်ခိုင်းပါဆိုပြီး ကြိုမှာထားတာကို ကြည့်ရကတည်းက မဝေဟာ အလုပ်လုပ်တာ စေ့စပ်သေချာပြီး စီမန့်ခန့်ခွဲတာ တော်တဲ့သူဆိုတာ တန်းသိလိုက်ရတာမျိုးပါ။ အချိန်တိကျတဲ့သူပီပီ ချိန်းထားတဲ့ချိန် ကွက်တိကိုရောက်လာပါတယ်။ နဂိုကတော့ ထင်ထားတာပေါ့နော် ဟော်တယ်လ်ပိုင်ရှင်၊ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အစ်မဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကပုံတွေလိုပဲနေမှာပေါ့ 😛 (ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ လျှော့ရမယ် :3 ) တကယ်တမ်း မဝေရောက်လာတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သူလိုကိုယ်လို သာမန်လေးပဲ ဝတ်စားပြီး ပေါ့ပါးတက်ကြွနေတဲ့ ဟိတ်ဟန်မရှိတဲ့ မဝေဟာ ရွှေတွေ၊ စိန်တွေမလိုအောင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ အရောင်တင်ထားပြီး ဇွဲသတ္တိအရောင်တလက်လက်တောက်နေသလိုပါပဲ။
မဝေအကြောင်းစပြောတဲ့အခါမှာလည်း အရမ်းကို တက်ကြွပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြောနေခဲ့တာပါ။ Hana တို့ဆို သူမပြောပြတဲ့ထဲမှာ မြောသွားပြီး လိုက်မှတ်ဖို့တောင် မေ့သွားရတဲ့အထိပါပဲ (တော်သေးတာပေါ့ အသံဖမ်းထားတာလေး ရှိလို့ 😀 )။ Hana မဝေဝေကျော်ကို အရမ်းလေးစားသွားတဲ့အချက်ကတော့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်း ရန်ကုန်ကို ရောက်လာပေမဲ့ အားငယ်တာ၊ ကြောက်ရွံ့တာ လုံးဝမရှိဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ထူးချွန်စွာလျှောက်လှမ်းသွားတာရယ်၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်ကနေ ထွက်လာခဲ့ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်စည်းကမ်းလေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး နေလာတာရယ်၊ လူငယ်ပီပီ တစ်ခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်အပါးလုပ်ပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလိုမလိုက်ဘဲ စည်းကမ်းတစ်ခုထားလို့ အလုပ်ပျက်မခံခဲ့တာတွေရယ် … ဒီအချက်တွေက Hana အတွက်တော့ အရမ်းကို လေးစားအတုယူစရာကောင်းတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။
“အစ်မက အလုပ်ကို အမြဲနံပါတ်(၁)နေရာထားတယ်။ ဒီရန်ကုန်လာပြီး Guest House (ဧည့်ရိပ်မွန်) လာဖွင့်ကတည်းက အပေါင်းအသင်းတွေလည်း များလာတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Barတွေ သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမ ယနေ့ချိန်ထိ ဘယ်တော့မှ ၁၂နာရီကျော်ထိ အပြင်မှာ မနေခဲ့ဘူး။ သောက်လားဆိုရင် သောက်တယ်။ တစ်ခွက်ထက်မပိုဘူး။ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမူးစေဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲထိန်းတယ်။ တစ်ခါတလေဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေက နေပါဦးပြောရင်တောင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အလိုမလိုက်ဘူး။ တော်ပြီ။ မနက်ငါအလုပ်သွားရဦးမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ငါခေါင်းနည်းနည်းမူးနေလို့ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တာပဲ။”
မဝေက တစ်ချိန်လုံး အလုပ်နဲ့လက်နဲ့ မပြတ်တဲ့သူပါ။ တခြားသူပြောရင် ယုံချင်မှယုံမှာပေမဲ့ မဝေကိုတော့ တကယ်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အင်တာဗျူးဖြေနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း တလေးတစားနဲ့ ဖြေပေးသလို ခဏနားကြတဲ့အချိန်မှာလည်း သူကိုယ်တိုင် အလုပ်တွေကို ဝင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနေတတ်တာမျိုးပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထ လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုး၊ ဧည့်သည်က ဟင်းမှာတာကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ချက်ပေးတာမျိုးတွေအပြင် ကိုယ်တွေစားဖို့ဆိုပြီး ဆန်စီးခေါက်ဆွဲအရည်ဖျော်ကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ချက်ပြီး ယူလာပေးတာမျိုးတွေပါ မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အားကျပြီးရင်းကျ၊ လေးစားပြီးရင်း လေးစားပါပဲ။
ဘယ်နားရောက်ရောက် Laptopတစ်လုံးနဲ့ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်ပဲ လုပ်နေပြီး အပျော်အပါးမရှိတဲ့ မဝေကို ဘဝမှာ နေရတာ မပျင်းဘူးလားဆိုပြီး အမေးခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း “အစ်မက တစ်ချိန်လုံးအလုပ်ပဲ လုပ်နေတယ်။ ဈေးသွားမယ်ဆိုလည်း စာရင်းအရင်မှတ်၊ ပြီးရင် City mart သွားပြီး စာရင်းထဲမှာ မှတ်ထားတာတွေ ကောက်ထည့် ၊ ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ငွေရှင်းပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်။ အိမ်လာတဲ့လမ်းမှာလည်း ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ တစ်ခါတည်း စဉ်းစားတယ်။ (၁) လုပ်နေရင် (၂)ကို စဉ်းစားတယ် ။ (၂) လုပ်နေရင် (၃) ကို စဉ်းစားတယ်။ အစ်မခေါင်းထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားတယ်။ ဆိုတော့ အစ်မတူမလေးက မေးတယ် အရီး မပျင်းဘူးလား.. အရီးကိုကြည့်လိုက်ရင် တစ်ချိန်လုံး အလုပ်ချည်းပဲတဲ့.. မပျင်းဘူးလားဆိုတော့ အစ်မ မပျင်းပါဘူး။ ဒီလောကထဲကို စရောက်တည်းက အလုပ်ကိုလုပ်ရင်း ၊ ကြိုးစားရင်း အလုပ်မှာပဲ ပျော်မွေ့လာတာမျိုးပေါ့။”ဆိုပြီး ရယ်သံနှောလို့ ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Related Article >>> လူသားကျောက်ဆောင် (သို့မဟုတ်) လပြည့်ဝိုင်း
“စီးပွားရေးလောကမှာ နာမည်တစ်ခုရလာပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်မြင်ပြီ၊ လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခါမှ မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို အစ်မကတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ ကိုယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘေးက လူတွေပါ အောင်မြင်မှုရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားခွင့်ရှိရမယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အောင်မြင်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်.. ဒီလိုပဲတွေးတယ်။ ခုဆိုလည်း အစ်မရဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာ ခေါ်ထားတာတွေက အစ်မရွာက ကလေးတွေချည်းပဲ။ ဆိုတော့ စိတ်လည်းချရတယ်လေ..” ဆိုတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် သဘောထားကလည်း အတုယူလောက်စရာပါ။
အခုဆိုရင် မဝေက ကျောက်လုပ်ငန်း ၊ ဧည့်ရိပ်မွန်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်အပြင်ကို cooking classပါ ဖွင့်ထားပါသေးတယ်။ ဒီ Cooking Class ကတော့ စီးပွားရေးသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ cooking classက ရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကို ပညာရေးကြောင့် ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေ ၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကို လှူနေတာမို့ပါတဲ့။
သူ(မ) ပြောခဲ့တဲ့ “လူတစ်ယောက်က အမှားမလုပ်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ အမှားတော့ရှိမှာပဲ။ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်မှာကြောက်မနေဘဲ အမှားတွေထဲက သင်ယူပါ။” ဆိုတာလေးကတော့ အတော်ကို အားဖြစ်စေတဲ့ စကားလေးပါ။
“တစ်ခါတလေ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေတော့ ကြုံခဲ့ရပေမဲ့ ဒါတွေဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းရှိမှာပါ။ ဘယ်အရာမဆို လူလုပ်ရင် ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အစ်မ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ငါကျရှုံးတော့မယ်။ ဒါက ငါရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုပဲ လို့ တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့ဖူးပါဘူး အလုပ်လုပ်ရာမှာလည်း အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံလာခဲ့ရပေမယ့် ဘယ်အရာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး ၊ နည်းလမ်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ် ဆိုပြီး လုံးဝအရှုံးမပေးဘဲ ကြိုးစားလာခဲ့တာပါ။ ”လို့ အရှုံးနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ သူမရဲ့ ရင်ဆိုင်ပုံလေးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
For Her Myanmar ရဲ့ ပရိသတ် ယောင်းယောင်းတွေထဲက မဝေလိုပဲ နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို တစ်ယောက်တည်းလာပြီး ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် စကားလက်ဆောင်လေး ပြောပေးပါဦးဆိုတော့.. “မိန်းကလေးဖြစ်စေ ၊ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲ ကိုယ်လုပ်နေတာကို ဆက်ကြိုးစားပါ ။ ဒီရန်ကုန်မှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပဲ ။ ဥပမာ နေစရိတ် ၊စားစရိတ်အခက်အခဲတွေ ၊ ဒါပေမဲ့လည်း အားမလျော့သွားဘဲ ဆက်ကြိုးစားပါ။ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အားမလျော့ဘဲ အမြဲကြိုးစားနေသူအတွက် နေရာတစ်ခုကတော့ အမြဲရှိပါတယ်။ လုံးဝကို နောက်မဆုတ်ဘဲ အားမလျော့ဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကြိုးစားစေချင်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါ ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့လမ်းစတွေရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းပြီး ကြိုးစားကြရင်တော့ အောင်မြင်ကြမှာပါ” လို့ပြောပေးခဲ့ပါတယ်။
Hanaကတော့ မဝေရဲ့ စကားတွေ နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင် ကိုယ်တိုင်လျှောက်လှမ်းဖို့ ခွန်အားတွေ အပြည့်ရခဲ့ပါတယ်။ ယောင်းတို့ရော အဲ့လို မခံစားရဘူးလား.. တစ်ယောက်တည်း ရန်ကုန်ကို စွန့်စားပြီးထွက်လာတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်လို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သုညဘဝက စတင်လို့ ခုချိန်မှာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာတယ်။ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကိုတောင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အောင်မြင်နေလို့ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အသုံးမဝင်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လည်း အသုံးမဝင်တာမို့ တစ်ယောက်တည်း ပိုက်ဆံရှိတာကိုတော့ အောင်မြင်မှုလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ မဝေရဲ့ အမြင်တွေ၊ အတွေးတွေက လေးစားလောက်စရာပါ.. တို့ယောင်းလေးတွေလည်း မဝေဝေကျော်လိုပဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ဘာမှ မရှိတဲ့ သုညကနေ တနျဖိုးရှိတဲ့ သုညဘဝကို ရောကျရှိခဲ့တဲ့ သူမဘဝဟာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
ယောငျးတို့ရေ… ယောငျးတို့ထဲမှာလညျး နယျက တဈယောကျတညျး ရနျကုနျကိုလာလို့ ကိုယျ့ဝမျးကိုယျကြောငျးပွီး ကိုယျ့တကျလမျး ကိုယျရှာနရေတဲ့ ယောငျးတှေ ရှိမှာပေါ့နျော.. အကျဒျမငျက ဒီလိုယောငျးလေးတှအေတှကျ အတုယူစရာကောငျးတဲ့ မမတဈယောကျကို ရှာတှထေ့ားပါတယျ။ အကျဒျမငျလညျး အဲဒီမမနဲ့စကားပွောပွီး သူ့ကို အားကြ၊ အတုယူပွီး သူ့လိုဖွဈအောငျ ကွိုးစားမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုး၊ အငျအားမြိုးရလာသလို ယောငျးတို့ကိုလညျး စိတျဓာတျခှနျအားလေးတှေ ရစခေငျြတာမို့ ဒီအငျတာဗြူးလေးကို ယောငျးတို့အတှကျ ဖနျတီးပေးလိုကျပါတယျရှငျ့..
သူ(မ)နာမညျကတော့ မဝဝေကြေျောပါတဲ့။ ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျးကနေ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတဈခုခုလုပျမယျ ဆိုပွီး ရနျကုနျကိုတကျလာတဲ့ သူတဈယောကျပေါ့။ မဝကေ မန်တလေးတက်ကသိုလျမှာ အဝေးသငျ တကျရောကျခဲ့တာပါ။ ကြောငျးတကျနစေဉျကတညျးက ကြောငျးပွီးသှားရငျ ရနျကုနျကို သှားပွီး ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတဈခု လုပျကိုလုပျမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြရှိခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။
အခြိနျကလြာတော့ ရညျရှယျခကျြကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ ရနျကုနျသှားမယျ ပွောတော့ မိသားစုက စိတျမခလြို့ လကျမခံခဲ့ပါဘူး။ မိဘဆိုတာကလညျး သားသမီး မကျြစိရှမှေ့ာ ရှိနတောတောငျ စိတျပူတတျတာမဟုတျလား ဒါလညျး အပွဈတငျလို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ရညျမှနျးခကျြကွီးတဲ့ သူမကတော့ ဒီတိုငျးပဲ မိဘစကားနားထောငျလို့ သူမဘဝကို ကြေးရှာလေးမှာ မမွှုပျနှံလိုပါဘူး။ ဒါကွောငျ့တဈခါပွောကွညျ့လညျးမရ ၊နှဈခါပွောလညျးမရ ၊ ဘယျလောကျပွောပွောမရတဲ့ အဆုံးမှာတော့ စာလေးတဈစောငျခနျြထားခဲ့ပွီး ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ရနျကုနျကို ရောကျလာပါတယျတဲ့..
“အဈမက အမကေိုပွောတယျ။ အမေ ရနျကုနျကို သှားခငျြတယျဆိုတော့ အမကေ ရနျကုနျကိုသှားရငျ အန်တရာယျမြားတယျပေါ့နျော။ သူဖတျထားတဲ့ မဂ်ဂဇငျးစာအုပျထဲက အကွောငျးပွောပွတယျ။ ဒီမှာ မိနျးမတဈယောကျ သူ့ကိုကွညျ့တော့ သဘောကောငျးမလိုနဲ့..ကောငျမလေးတဈယောကျကို တှတေ့ော့ အလုပျရှိတယျလို့ ပွောပွီး ချေါသှားပွီးတော့ ရောငျးစားလိုကျတယျ။ ရနျကုနျမွို့က ကွောကျဖို့ကောငျးတယျ။ လူရောငျးစားတယျ။ နငျဘာသိလဲ ၊ မသှားနဲ့ဆိုပွီး တားတယျ။ အဈမ သုံးခါပွောတယျ ၊ အဖကေော ၊ အမကေောပေါ့နျော။ နှဈယောကျလုံးက မသှားနဲ့ပဲ တားတယျ။ အမနောကျတော့ သှားမယျလို့ ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး စာလေးရေးပွီး ခနျြထားခဲ့တယျ။ အမ ဘဝတဈခုလုံးကို ဒီတောငျပျေါမှာ မနှဈမွှုပျခငျြဘူး ပွောပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ထှကျလာခဲ့တယျ။”
Related Article >>> “အမြိုးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျအရာမှမဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာမရှိစရေဘူး၊ ဒုတိယနရောမှာမဟုတျဘဲ ပထမတနျးမှာနပေါ” ဆိုတဲ့ မလှလှဝငျး
ရနျကုနျကိုရောကျတော့ မကျြစိသူငယျ၊ နားသူငယျနဲ့ ဘဝကွီးကို နဖူးတှဒေူ့းတှတှေ့တေ့ယျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျပိုငျအလုပျမှမဟုတျရငျ သူမြားဝနျထမျးလညျး မလုပျဘူးဆိုပွီး စိတျဓာတျခိုငျမာတဲ့ မဝဟော ရနျကုနျကို စရောကျလာတညျးက ကိုယျတတျတဲ့အတတျပညာနဲ့ ဗိုလျခြုပျဈေးမှာ ကြောကျကွညျ့ပွီး အသကျမှေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီကြောကျလုပျငနျးနဲ့ပဲ အဆငျပွတောလညျးရှိ၊ မပွတောတှလေညျးရှိ လုပျကိုငျနရောကနေ ကြောကျလောက အခွအေနေ မကောငျးတော့တဲ့အခါ လုပျငနျးသဈအနနေဲ့ Guest House (ဧညျ့ဂဟော) ဖှငျ့ဖို့ စဉျးစားဖွဈခဲ့ပါတယျတဲ့…
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတသြိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
အတှအေ့ကွုံမရှိ၊ အသိအကြှမျးမရှိ၊ Hotel Life က လာတဲ့သူလညျး မဟုတျတဲ့ မဝအေတှကျတော့ ဒီလုပျငနျးက ဘယျလှယျကူပါ့မလဲ? နိုငျသလောကျအငျအားနဲ့ စလုပျပွီဆိုပွနျတော့ ရလာတဲ့ အိမျကလညျး သေးသေးလေးပေါ့။ သူငယျခငျြးတှအေားလုံးက မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ဝိုငျးပွောခဲ့တဲ့ကွားက ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာတဲ့သူမဟာ အရာရာကို သူမအငျအားနဲ့ မဖွဈဖွဈအောငျ ကွိုးစားရုနျးကနျခဲ့ပွနျပါတယျ။ သူမဖှငျ့ထားတဲ့ အိမျကလေးရဲ့ နှေးထှေးတဲ့ကွိုဆိုမှု ၊ ဇှဲရှိမှု ၊ကွိုးစားအားထုတျမှုတှကွေောငျ့ စတငျလုပျတဲ့အခြိနျမှာတငျ Trip advisor မှာ နံပါတျ(၁) ၊ (၂) ဆိုတဲ့ ထိပျပိုငျးနရောကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
“အိမျလေးခနျးလေးကိုငှားခဲ့တယျ။ သူငယျခငျြးတှအေားလုံးကတော့ နငျ ရူးနလေားပေါ့။ နငျက မဖွဈနိုငျဘူးပေါ့။ ဘာလို့လုပျတာလဲဆိုပွီး ဝိုငျးပွောကွတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလညျး ဒီလိုပဲ လုပျကွညျ့မယျလေ။ မဖွဈရငျလညျး နောကျတဈနညျးပေါ့ဆိုပွီး လုပျလိုကျတာ ။ အဲလိုပဲ ကိုယျ့ရဲ့လေးခနျးလေးကို တဈယောကျက တဈခနျးလာနသှေားလိုကျ ၊ နောကျနှဈခနျးလာနသှေားလိုကျနဲ့ ၊ နောကျတော့ လေးခနျးလုံးကို ပွညျ့နရေော ၊အစပိုငျးကဆို အမရဲ့အိမျထဲကိုဝငျလာတာနဲ့ ဒါကဧညျ့ရိပျမှနျရော ဟုတျရဲ့လားဆိုပွီး မေးကွတယျ။ ဟုတျတယျ.. အဲလိုပဲ အရမျးအားငယျရတယျ။ အိမျလေးကလညျး စုတျစုတျလေးဆိုတော့ ။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျကတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျထားတယျ။ ဧညျ့သညျတှအေတှကျတော့ နှေးနှေးထှေးထှေးဖွဈအောငျ ပွငျဆငျပေးထားတယျ။ နံနကျစာဆိုလညျး အဈမကိုယျတိုငျ ခကျြတာတို့ ၊ နလေ့ယျစာ ၊ညစာအကုနျ အဈမကိုယျတိုငျ ခကျြဖွဈပါတယျ။ ဧညျ့သညျတှနေဲ့အတူတူ ခကျြစား ၊ ပွုတျစားကွတော့ ဧညျ့သညျတှကေ ဒီလို နှေးထှေးတဲ့ ခံစားခကျြလေးကို သဘောကကြွတယျ ။ အဲလိုနဲ့ သူတို့က Trip advisor မှာ Review တကျရေးကွတယျ။ အဲလိုရေးရငျးနဲ့ လူသိမြားလာတာ ၊ စစလုပျခငျြးမှာပဲ အဈမက Trip advisorမှာ နံပါတျ(၁) ၊(၂) နရောကို ရခဲ့ပါတယျ။
အဓိက ကတော့ ကိုယျ့ရဲ့နှေးထှေးမှုပေါ့နျော ။Techonology (နညျးပညာ) ပိုငျးလညျး ပါတာပေါ့နျော။ အနောကျနိုငျငံကလူတှကေ ဒီTrip advisorပဲကွညျ့ပွီး လာတညျးကွတာဆိုတော့… အဲ့တုနျးက တဈခနျးကို ၃၅ဒျေါလာနဲ့ ငှားတယျ။ ၃၅ဒျေါလာ ၃ခနျးရှိတယျ။ ၂၅ဒျေါလာတဈခနျးရှိတယျ။ အဲ့အိမျကလေးကို ၇သိနျးခှဲနဲ့ ငှားခဲ့တာ ။ စားစရိတျတှနေဲ့ ပေါငျးလိုကျရငျ တဈလကို ကိုယျ့အတှကျ ၂၇သိနျးလောကျကနျြတယျ။ ၁၀လဆိုတော့ သိနျး၂၇၀ပေါ့နျော။တဈနှဈကတြော့ စုမိတဲ့ငှကေ သိနျး၃၀၀ကြျောသှားရော…
ဒီအလုပျလေးက ကိုယျနဲ့ ကံစပျတယျပဲ ပွောရမလား။ အဈမဆီမှာ ဟိုတယျကွီးတှလေို facilities ကောငျးကောငျး မရှိပမေယျ့ ဧညျ့သညျတှကေ ပြျောကွတယျ။ တဈခြို့ ဧညျ့သညျတှကေတော့ အဈမဆီမှာ Facilityမရှိလို့ဆိုပွီး အခွားဟိုတယျကို ရှသှေ့ားကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ညတှငျးခငျြးပွနျရောကျလာတယျ။ မတူဘူးပေါ့နျော။ ဟိုဘကျက ဖနျစီ(Fancy) ဖွဈပမေယျ့ နှေးထှေးမှုကို မခံစားရဘူးဆိုပွီး ပွောကွတယျ။ ”
ကဲ.. စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျမလား ယောငျးတို့.. ဒါပမေဲ့ ဒါက မဝရေဲ့ ခရီးဆုံးမဟုတျသေးပါဘူး။ သူ(မ)ဆကျလြှောကျနဆေဲပါ။ ဘယျလမျးကို ဘယျလိုလြှောကျနလေဲဆိုတာကတော့…
Related Article >>> မုဒိနျးမှု ဆနျ့ကငျြရေးလှုပျရှားမှုမှာ ဝတျစားဆငျယငျမှုကွောငျ့ ဝဖေနျခံခဲ့ရတဲ့ သူမနှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး
မဝရေဲ့ ဟျောတယျလုပျငနျးလညျး တဈစတဈစနဲ့ အောငျမွငျလာပွီးတော့ အခုဆိုရငျ “WaiWai’s place” ဆိုပွီး အောငျမွငျစှာနဲ့ ရပျတညျနပေါပွီ။ ဒါနဲ့အောငျမွငျနပေမေယျ့ မဝဟော သူ(မ)ရဲ့ ပညာလကျရငျးဖွဈတဲ့ ကြောကျလုပျငနျးကိုလညျး ပဈမထားခဲ့ပါဘူး။ ခုခြိနျထိလညျး ကြောကျအရောငျးအဝယျလုပျငနျးကို ဆကျပွီး အသကျသှငျးနဆေဲဖွဈပွီး လုပျငနျးတှေ တိုးခြဲ့နဆေဲပါ။
အောငျမွငျနတေဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈလောကျစရာ အောငျမွငျနိုငျတဲ့ အရညျအသှေးတှေ၊ အပွုအမူတှကေိုလညျး သူမဆီမှာ အမြားကွီးတှခေဲ့ရပါတယျ။
မဝကေို သှားအငျတာဗြူးခဲ့တုနျးကဆို Hanaတို့ကနညျးနညျးစောပွီး ရောကျသှားခဲ့တော့ မဝရေဲ့ ဧညျ့ရိပျမှနျမှာ ရှိမနပေမေဲ့လညျး လကျအောကျဝနျထမျးတှကေို လာရငျဘယျနရောမှာ စောငျ့ခိုငျးပါဆိုပွီး ကွိုမှာထားတာကို ကွညျ့ရကတညျးက မဝဟော အလုပျလုပျတာ စစေ့ပျသခြောပွီး စီမနျ့ခနျ့ခှဲတာ တျောတဲ့သူဆိုတာ တနျးသိလိုကျရတာမြိုးပါ။ အခြိနျတိကတြဲ့သူပီပီ ခြိနျးထားတဲ့ခြိနျ ကှကျတိကိုရောကျလာပါတယျ။ နဂိုကတော့ ထငျထားတာပေါ့နျော ဟျောတယျလျပိုငျရှငျ၊ စားသောကျဆိုငျပိုငျရှငျ အဈမဆိုတော့ ရုပျရှငျထဲကပုံတှလေိုပဲနမှောပေါ့ 😛 (ရုပျရှငျကွညျ့တာ လြှော့ရမယျ :3 ) တကယျတမျး မဝရေောကျလာတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သူလိုကိုယျလို သာမနျလေးပဲ ဝတျစားပွီး ပေါ့ပါးတကျကွှနတေဲ့ ဟိတျဟနျမရှိတဲ့ မဝဟော ရှတှေေ၊ စိနျတှမေလိုအောငျ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျ ယုံကွညျမှုတှနေဲ့ အရောငျတငျထားပွီး ဇှဲသတ်တိအရောငျတလကျလကျတောကျနသေလိုပါပဲ။
မဝအေကွောငျးစပွောတဲ့အခါမှာလညျး အရမျးကို တကျကွှပွီး ယုံကွညျခကျြရှိရှိနဲ့ပွောနခေဲ့တာပါ။ Hana တို့ဆို သူမပွောပွတဲ့ထဲမှာ မွောသှားပွီး လိုကျမှတျဖို့တောငျ မသှေ့ားရတဲ့အထိပါပဲ (တျောသေးတာပေါ့ အသံဖမျးထားတာလေး ရှိလို့ 😀 )။ Hana မဝဝေကြေျောကို အရမျးလေးစားသှားတဲ့အခကျြကတော့ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျမှုပါ။
မိနျးကလေးတဈယောကျတညျး ရနျကုနျကို ရောကျလာပမေဲ့ အားငယျတာ၊ ကွောကျရှံ့တာ လုံးဝမရှိဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ကိုယျ့လမျးကိုယျ ထူးခြှနျစှာလြှောကျလှမျးသှားတာရယျ၊ မိဘအုပျထိနျးမှုအောကျကနေ ထှကျလာခဲ့ပမေယျ့လညျး ကိုယျ့စညျးကမျးလေးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးသိမျးပွီး နလောတာရယျ၊ လူငယျပီပီ တဈခါတလေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပြျောအပါးလုပျပမေဲ့လညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလိုမလိုကျဘဲ စညျးကမျးတဈခုထားလို့ အလုပျပကျြမခံခဲ့တာတှရေယျ … ဒီအခကျြတှကေ Hana အတှကျတော့ အရမျးကို လေးစားအတုယူစရာကောငျးတဲ့ အခကျြတှပေါပဲ။
“အဈမက အလုပျကို အမွဲနံပါတျ(၁)နရောထားတယျ။ ဒီရနျကုနျလာပွီး Guest House (ဧညျ့ရိပျမှနျ) လာဖှငျ့ကတညျးက အပေါငျးအသငျးတှလေညျး မြားလာတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Barတှေ သှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမ ယနခြေိ့နျထိ ဘယျတော့မှ ၁၂နာရီကြျောထိ အပွငျမှာ မနခေဲ့ဘူး။ သောကျလားဆိုရငျ သောကျတယျ။ တဈခှကျထကျမပိုဘူး။ ဘယျတော့မှ ကိုယျ့ကိုယျကို မမူးစဘေူး။ ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲထိနျးတယျ။ တဈခါတလဆေိုရငျ သူငယျခငျြးတှကေ နပေါဦးပွောရငျတောငျ ဘယျတော့မှ ကိုယျ့စိတျကိုယျ အလိုမလိုကျဘူး။ တျောပွီ။ မနကျငါအလုပျသှားရဦးမယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ငါခေါငျးနညျးနညျးမူးနလေို့ ဆိုပွီး အမြိုးမြိုးပွောပွီး ပွနျလာခဲ့တာပဲ။”
မဝကေ တဈခြိနျလုံး အလုပျနဲ့လကျနဲ့ မပွတျတဲ့သူပါ။ တခွားသူပွောရငျ ယုံခငျြမှယုံမှာပမေဲ့ မဝကေိုတော့ တကယျကို ယုံကွညျခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့ဆို အငျတာဗြူးဖွနေတေဲ့အခြိနျတှမှောလညျး တလေးတစားနဲ့ ဖွပေေးသလို ခဏနားကွတဲ့အခြိနျမှာလညျး သူကိုယျတိုငျ အလုပျတှကေို ဝငျပွီး စီမံခနျ့ခှဲနတေတျတာမြိုးပါ။ ကိုယျကိုယျတိုငျ ထ လုပျပေးလိုကျတာမြိုး၊ ဧညျ့သညျက ဟငျးမှာတာကို ကိုယျတိုငျ ဝငျခကျြပေးတာမြိုးတှအေပွငျ ကိုယျတှစေားဖို့ဆိုပွီး ဆနျစီးခေါကျဆှဲအရညျဖြျောကို ကိုယျတိုငျ ဝငျခကျြပွီး ယူလာပေးတာမြိုးတှပေါ မွငျခဲ့ရတဲ့အတှကျ အားကပြွီးရငျးကြ၊ လေးစားပွီးရငျး လေးစားပါပဲ။
ဘယျနားရောကျရောကျ Laptopတဈလုံးနဲ့ တဈခြိနျလုံး အလုပျပဲ လုပျနပွေီး အပြျောအပါးမရှိတဲ့ မဝကေို ဘဝမှာ နရေတာ မပငျြးဘူးလားဆိုပွီး အမေးခံခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကိုလညျး “အဈမက တဈခြိနျလုံးအလုပျပဲ လုပျနတေယျ။ ဈေးသှားမယျဆိုလညျး စာရငျးအရငျမှတျ၊ ပွီးရငျ City mart သှားပွီး စာရငျးထဲမှာ မှတျထားတာတှေ ကောကျထညျ့ ၊ ပွီးတာနဲ့ တဈခါတညျး ငှရှေငျးပွီး အိမျပွနျလာတယျ။ အိမျလာတဲ့လမျးမှာလညျး ပွီးရငျ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာ ခေါငျးထဲမှာ တဈခါတညျး စဉျးစားတယျ။ (၁) လုပျနရေငျ (၂)ကို စဉျးစားတယျ ။ (၂) လုပျနရေငျ (၃) ကို စဉျးစားတယျ။ အဈမခေါငျးထဲမှာ တဈခြိနျလုံး ဘာပွီးရငျ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာ စဉျးစားထားတယျ။ ဆိုတော့ အဈမတူမလေးက မေးတယျ အရီး မပငျြးဘူးလား.. အရီးကိုကွညျ့လိုကျရငျ တဈခြိနျလုံး အလုပျခညျြးပဲတဲ့.. မပငျြးဘူးလားဆိုတော့ အဈမ မပငျြးပါဘူး။ ဒီလောကထဲကို စရောကျတညျးက အလုပျကိုလုပျရငျး ၊ ကွိုးစားရငျး အလုပျမှာပဲ ပြျောမှလေ့ာတာမြိုးပေါ့။”ဆိုပွီး ရယျသံနှောလို့ ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။
Related Article >>> လူသားကြောကျဆောငျ (သို့မဟုတျ) လပွညျ့ဝိုငျး
“စီးပှားရေးလောကမှာ နာမညျတဈခုရလာပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အောငျမွငျပွီ၊ လုံလောကျပွီဆိုတဲ့ အတှေးတဈခါမှ မဝငျခဲ့ပါဘူး။ အောငျမွငျမှုဆိုတာကို အဈမကတော့ ပိုကျဆံခမျြးသာမှလို့ မသတျမှတျဘူး။ ကိုယျအောငျမွငျတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဘေးက လူတှပေါ အောငျမွငျမှုရဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို ခံစားခှငျ့ရှိရမယျ။ ကိုယျတဈယောကျတညျး အောငျမွငျနလေို့မရဘူးပေါ့နျော.. ဒီလိုပဲတှေးတယျ။ ခုဆိုလညျး အဈမရဲ့ လုပျငနျးတှအေားလုံးမှာ ချေါထားတာတှကေ အဈမရှာက ကလေးတှခေညျြးပဲ။ ဆိုတော့ စိတျလညျးခရြတယျလေ..” ဆိုတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ အောငျမွငျမှုအပျေါ သဘောထားကလညျး အတုယူလောကျစရာပါ။
အခုဆိုရငျ မဝကေ ကြောကျလုပျငနျး ၊ ဧညျ့ရိပျမှနျနဲ့ စားသောကျဆိုငျအပွငျကို cooking classပါ ဖှငျ့ထားပါသေးတယျ။ ဒီ Cooking Class ကတော့ စီးပှားရေးသကျသကျမဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ cooking classက ရတဲ့အကြိုးအမွတျတှကေို ပညာရေးကွောငျ့ ခကျခဲနတေဲ့သူတှေ ၊ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ ခကျခဲနတေဲ့သူတှကေို လှူနတောမို့ပါတဲ့။
သူ(မ) ပွောခဲ့တဲ့ “လူတဈယောကျက အမှားမလုပျဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ အမှားတော့ရှိမှာပဲ။ အမှားလုပျခဲ့တဲ့ပျေါမှာကွောကျမနဘေဲ အမှားတှထေဲက သငျယူပါ။” ဆိုတာလေးကတော့ အတျောကို အားဖွဈစတေဲ့ စကားလေးပါ။
“တဈခါတလေ အဆငျမပွမှေုတှေ ကွုံလာတဲ့အခါမှာလညျး စိတျဖိစီးမှုတှတေော့ ကွုံခဲ့ရပမေဲ့ ဒါတှဖွေရှေငျးဖို့ နညျးလမျးရှိမှာပါ။ ဘယျအရာမဆို လူလုပျရငျ ဖွဈတယျ ဆိုပွီး အဈမ ကိုယျ့ကိုယျကို အားပေးပါတယျ။ ဘယျတော့မှ ငါကရြှုံးတော့မယျ။ ဒါက ငါရဲ့ ရှုံးနိမျ့မှုပဲ လို့ တဈခါမှ မတှေးခဲ့ဖူးပါဘူး အလုပျလုပျရာမှာလညျး အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ကွုံလာခဲ့ရပမေယျ့ ဘယျအရာမှမဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ မရှိဘူး ၊ နညျးလမျးတဈခုခုတော့ရှိရမယျ ဆိုပွီး လုံးဝအရှုံးမပေးဘဲ ကွိုးစားလာခဲ့တာပါ။ ”လို့ အရှုံးနဲ့ ကွုံလာတဲ့အခါ သူမရဲ့ ရငျဆိုငျပုံလေးကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
For Her Myanmar ရဲ့ ပရိသတျ ယောငျးယောငျးတှထေဲက မဝလေိုပဲ နယျကနေ ရနျကုနျကို တဈယောကျတညျးလာပွီး ကွိုးစားနသေူတှအေတှကျ စကားလကျဆောငျလေး ပွောပေးပါဦးဆိုတော့.. “မိနျးကလေးဖွဈစေ ၊ ယောကျြားလေးဖွဈစေ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ ကွောကျရှံ့မှုမရှိဘဲ ကိုယျလုပျနတောကို ဆကျကွိုးစားပါ ။ ဒီရနျကုနျမှာ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးပဲ ။ ဥပမာ နစေရိတျ ၊စားစရိတျအခကျအခဲတှေ ၊ ဒါပမေဲ့လညျး အားမလြော့သှားဘဲ ဆကျကွိုးစားပါ။ တဈခုမဟုတျတဈခု အားမလြော့ဘဲ အမွဲကွိုးစားနသေူအတှကျ နရောတဈခုကတော့ အမွဲရှိပါတယျ။ လုံးဝကို နောကျမဆုတျဘဲ အားမလြော့ဘဲ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီး ကွိုးစားစခေငျြတယျ။ ရနျကုနျမှာ တဈယောကျတညျးနတေဲ့အခါ ပကျြစီးစနေိုငျတဲ့လမျးစတှရှေိပမေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိနျးသိမျးပွီး ကွိုးစားကွရငျတော့ အောငျမွငျကွမှာပါ” လို့ပွောပေးခဲ့ပါတယျ။
Hanaကတော့ မဝရေဲ့ စကားတှေ နားထောငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျ ကိုယျတိုငျလြှောကျလှမျးဖို့ ခှနျအားတှေ အပွညျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ယောငျးတို့ရော အဲ့လို မခံစားရဘူးလား.. တဈယောကျတညျး ရနျကုနျကို စှနျ့စားပွီးထှကျလာတယျ။ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျလို့ ကွိုးစားခဲ့တယျ။ သုညဘဝက စတငျလို့ ခုခြိနျမှာ အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါ ရောကျလာတယျ။ အောငျမွငျခွငျးဆိုတာကိုတောငျ ကိုယျတဈယောကျတညျး အောငျမွငျနလေို့ကတော့ ပတျဝနျးကငျြအတှကျလညျး အသုံးမဝငျ၊ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးအတှကျလညျး အသုံးမဝငျတာမို့ တဈယောကျတညျး ပိုကျဆံရှိတာကိုတော့ အောငျမွငျမှုလို့ မသတျမှတျနိုငျပါဘူးဆိုတဲ့ မဝရေဲ့ အမွငျတှေ၊ အတှေးတှကေ လေးစားလောကျစရာပါ.. တို့ယောငျးလေးတှလေညျး မဝဝေကြေျောလိုပဲ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျကွိုးစားရငျး အောငျမွငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..
Tags: Interview, Knowledge, Motivation
Nilar March 8, 2018